ဥမ္မာလွင် – Page5– The Voice Journal
စိမ်းနုရောင်နှစ်ထပ်တိုက် ကင်ဆာပြင်ပလူနာဌာန အဆောက်အအုံ၏ ဒုတိယထပ်ရှိ ထိုင်ခုံတစ်ခုံတွင် စွပ်ကျယ်အမည်း၊ ပုဆိုးအဝါကွက်ဝတ်ဆင်ထားသူ အသက် ၄၀ အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး ထိုင်နေသည်။ ခပ်ပိန်ပိန်ဖြစ်နေသော ဘယ်ဘက်လက်ကို ဘယ်ဘက်ပေါင်ပေါ်တွင် တင်၍ ပိုက်တန်းလန်းဖြင့် ကင်ဆာဆေး သွင်းနေသည်။ သူ့အသက်...
ရေရှည်တည်တံ့သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းများကို သုတေသနပြုလုပ်ကာ ရှာဖွေနိုင်သည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏ သိပ္ပံနည်းကျရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ထားသည့် နည်းလမ်းဖြင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်အောင် တီထွင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် သိပ္ပံပြပွဲတွင် ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒဌာနမှ ကျောင်းသားများက စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအဖြစ်...
သမုဒ္ဒရာပမာ ကျယ်ပြန့်သော လူတို့၏ ဝမ်းတစ်ထွာအလိုကို ဖြည့်စွမ်းရန်အလို့ငှာ စားသောက်ဆိုင်တို့က တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ အသုံးတော်ခံလျက်ရှိသည်။ မြို့ပြမွန်းကျပ်မှုအကြား ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရသူများအတွက် စားသောက်မှုပုံစံက အိမ်တွင် လက်ဆုံစားသည့် အလေ့အထမှသည် စားသောက်ဆိုင်များဆီသို့ ဦးလှည့်ကြကုန်ပြီဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးတံခါးပွင့်စအချိန်တွင် မြန်မာ့ခံတွင်းက တရုတ်၊ အိန္ဒိယ...
Articles / Special Reports
ခေတ်သစ် ‘အ’ တစ်လုံး ကျေပြီလော
အာရှနိုင်ငံများကြားတွင်ပင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ယှဉ်ပြိုင်စွမ်းအား ပိုမိုလျော့နည်းလာလျက်ရှိသည်။ ကမ္ဘာနှင့် အာရှနိုင်ငံများအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၈၈ နိုင်ငံတွင် ကောက်ယူထားသော အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်တမ်းတစ်ခုတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အဆင့် ၈၂ ဖြင့် ရပ်တည်နေသည်။ မကြာသေးမီက ထွက်ရှိလာသော ထိုစစ်တမ်းအရ မြန်မာနိုင်ငံနောက်တွင်...
Articles / Environment
ဆေးများကွာကျပြီး ချေးအလိမ်းလိမ်းတက်နေသည့် နံရံများပေါ်တွင် ဆေးရောင်စုံပန်းချီကားများ အစားထိုး ဝင်လာသည်။ နံရံထက်တွင် ကလေးများအကြိုက် ကာတွန်းဇာတ်ကောင်များထဲမှ ဇာတ်လိုက်ပုံများ၊ ရှုခင်းပုံများကို ဆေးခြယ်ထားသည်။ ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ တိုက်တန်းများ၏ နောက်ဖေးလမ်းကြားတွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်များဖြင့် ပြည့်နေသည်ကို ရှင်းလင်းကာ အပန်းဖြေအနားယူစရာ၊ ကလေးများ...
ဆရာဝန် စာရေးဆရာမကြီးကြည်အေး ရေးဖွဲ့သီကုံးထားသည့် ‘မီ’ ဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာချိန်တွင် ရုပ်ရှင်အနုပညာ၊ ရသစာပေလောကနှင့် ကျန်းမာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကြား ငြင်းခုန်မှု ဖြစ်လာသည်။ မီ ဝတ္ထုသည် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဓိကဇာတ်ရုပ်မှာ ကျန်းမာရေးမကောင်းသူ နားလည်ရခက်သည့် မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး...
Articles / Cover Stories / Health
ကိုလိုနီခေတ်လက်ရာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၏ အနောက်ဘက်တွင် လူနာဆောင်တစ်ခု ရှိပါသည်။ ဤအဆောင်ရှိ လူနာများသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကြောက်မက်ဖွယ် ရောဂါတစ်မျိုးနှင့် ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိသည်။ ထိုအဆောင်ကို ကင်ဆာလူနာဆောင်ဟု ခေါ်သည်။ ကင်ဆာလူနာဆောင်ထဲကို ဝင်လိုက်ပါက အခြားလူနာများနှင့် မတူသည်ကို ဦးစွာတွေ့မြင်ရမည်။ လူနာခုတင်များက...
မိုးလေကင်းစင်လေပြီ။ ရွှေဝါရောင်သန်းရင့်မှည့်နေသော စပါးများကို ရိတ်သိမ်းတော့မည်။ စပါးရိတ်သိမ်းပြီးနောက်တွင် ရောင်းချမည့်စပါးကို တင်းတောင်းများဖြင့်ချိန် ထည့်ထားသည်။ ထိုတစ်ချိန်တည်းမှာပင် နောက်တစ်ရာသီအတွက်လိုအပ်သည့် စပါးမျိုးစေ့များကို အခြောက်လှန်းရသည်။ ထို့နောက် အိတ်ထဲထည့်သိမ်းသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူဦးရေ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် လယ်သမားများဖြစ်ကြသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကို...
အက်ဒမန်ပင်လယ်တွင်း စေလွှတ်မည့် မြန်မာရေငုပ်သင်္ဘောကို ထိုင်းစောင့်ကြည့်သွားမည်
အိန္ဒိယန်ိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဆ်ိုင်ရာ ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်းကို မွတ်ဆလင်ပါတီတစ်ခု ကန့်ကွက်